Taliyihii Ciidamada Asluubta Soomaaliya oo Xabsi daa’in, | Newsomali
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukuno ku riday dad lagu soo eedeeyay inay qaran dumis yihiin, kuwaasoo ka kala tirsanaa Waaxda Garsoorka iyo Taliska Ciidamada Asluubta.
Gudoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida Liibaan Cabdi Yarow ayaa sheegay in Taliyihii hore Ciidamada Asluubta Liibaan Cabdi yarow uu ku lug lahaa see deynta 14-maxbuus ahaa eedeysanayaal, isla markaana xukun sugayaan ahaa iyo Agaasimihii Garsoorka, kuwaasoo uu ku eedeeyay inay qiyaano qaran galeen, ayna u adeegsadeen daarajada qaranka inay ku sii daayaan dambiilayaan.
“Maxkamada waxay ku xukuntay Ex Taliyihii hore Ciidamada Asluubta Sareeye guuto Cabdi Maxamed Ismaaciil in ugu horeyn darajadiisa laga xayuubiyay, xil dambena uusan qaban doonin, waxaa lagu xukumay Xabsi daa’in, sidoo kale Agaasimaha Garsoorka Xasan Cabdi Axmed (Xasan Liibiya) waxaa lagu xukumay xabsi shan sano ah”ayuu yiri Liibaan yarow.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Muuse Ciise Nuur oo ahaa nin horay Maxkamada xukuntay, balse ay sii daayeen saraakiishan la xukumayo, iyagoo siiyay darajo ciidan oo dhame ah laga qaatay aqoonsigiisa, isla markaana uu dhameysanayo xukunkii horay lagu riday oo ahaa 8-sano, isagoo tilmaamay in xukunkiisa uu u furan yahay rafcaan.
Liibaan Yarow ayaa sidoo kale sheegay in nin eedeysane ahaa oo loo heystay inuu dilay askari ka tirsan dowladda lagu waayay dambigiisa, isla markaana Maxkamada ay sii deysay.
Xukunkan ay riday Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa noqonaya kii u horeeyay ee lagu rido Sarkaal ka tirsan Ciidamada qalabka sida, gaar ahaan Taliyihii ugu sareeyay Ciidamada Asluubta ee qaabilsan qeybta Xabsiyada.